1. အိပ်ရေး ဝဝ အိပ်ပါ။
ရာသီလာတဲ့သူ ဖြစ်စေ၊ မလာတဲ့သူ ဖြစ်စေ ကျမတို့ အားလုံး အိပ်ရေးမဝတဲ့ အခါ တော်တော် အဆင်မပြေတဲ့ အပြုအမူတွေ လုပ်တတ်ကျလေ့ရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအမူ၊ ပြောဆိုနေထိုင်မှုတွေက သူ့ရဲ့ အိပ်ရေးဝမှု နဲ့ တိုက်ရိုက် အချိုးကျတယ်လို့တောင် ပြောလို့ ရမယ်ထင်တယ်။ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ရင် ကျမတို့က ပိုပြီး တက်ကြွနိုင်၊ နားထောင်နိုင်၊ လှုပ်ရှားနိုင်၊ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားနိုင် သောက်နိုင် တဲ့ သူ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ရာသီလာတဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက် ရာသီလာစဉ်မှာ မိမိ အိပ်ရေးကို လွန်စွာ ဂရုစိုက် အလေးထားသင့်ပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝရင် ကျမတို့ရဲ့ ဟော်မုန်းတွေက အလိုလိုနေရင် ဟန်ချက်မညီ ဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ့်ကို ပြည့်ဝတဲ့ အိပ်ချိန်လေးပေးကြစို့နော်။
2. ရေနွေး(herbal tea)ကို သောက်ပါ။
ပုံမှန်နေ့တွေဆိုရင် ကျမက ရေ အရမ်း ကြိုက်၊ အရမ်းသောက်တတ်တဲ့ သူ တစ်ယောက်ပါ။ ရာသီလာခါနီး၊ ရာသီလာနေစဉ်ဆိုရင်တော့ ကျမက ရေနွေးတွေ တော်တော် သောက်တတ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ရာသီဥတုအရ ရေနွေးသောက်ရတာ သိပ်ပုံဖော်ချင်စရာ မကောင်းပေမဲ့ ကျမတစ်ယောက် ခုဆိုရင် နေတိုင်းလိုလို ရေပူ ၂ ကနေ ၃ ခွက် အနည်းဆုံး သောက်ဖြစ်တယ်။ ရေနွေး (herbal teaတွေ) သောက်ချင်က ခန္ဓာကိုယ်ကို အပူဓါတ် ပေးခြင်းဖြစ်တဲ့ အတွက် နာကျင်မှု တွေကို ဖြေလျှော့သက်သာစေတဲ့လို့ ထွက်ဆိုချက်တစ်ချို့က ကောက်နုတ်ထားပါတယ်။
3. စိတ်ထဲ ရှိတာ ချရေးပါ။ မှတ်တမ်း တင်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို စကားလုံးတွေနဲ့ စာအုပ်မှာ ချရေးတာဟာ ကျမအတွက် အလုံခြုံသော ဖွင့်ဟဝန်ခံနည်းတစ်ခု လို့ ပြောရမယ်။ စာရေးတတ်စ အရွယ်ကတည်းက ကျမက တနေတာ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ တရားမမျှတမှုတွေ၊ စိတ်ခံစားချက်တွေ နဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေကို စာရွက်တွေပေါ်မှာ ချရေးလေ့ရှိတယ်။ ရာသီလာတဲ့ အချိန်မှာဆိုရင်လည်း မိမိ ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ပြောင်းလဲမှု၊ ခံစားချက် ရူးရူးသွပ်သွပ် ဖြစ်မှု၊ နားမလည်မှုတွေကို ချရေးခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ့်ကိုယ် မိမိ အားပေးနှစ်သိပ်လေ့ရှိခဲ့တယ်။ Journaling isawindow to my feelings. ဒါပြင့် မိမိရေး ရာသီလာတဲ့ ရက်တွေကို မှတ်သားထားတတ်တယ်။ ခုတော့ Clue ဆိုတဲ့ application တစိုက်မှတ်မှတ် အသုံးပြုဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ရာသီလာတဲ့ရက်၊ခံစားချက်၊ အိပ်ရေးဝ မှု မဝမှု၊ လေ့ကျင်ခန်း လုပ်တာ မလုပ်တာ စသဖြင့်ကို အလွယ်တကူ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့ အတွက် Clue က သိပ် အဆင်ပြေတဲ့ application ဖြစ်တဲ့ အတွက် အားလုံးကို ဖုန်းမှာ ဒေါင်းလုတ် လုပ်ထားဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ကိုယ့် ရာသီလာတဲ့ နေ့ရက်တွေ ခံစားချက်တွေ စသဖြင့်ကို ဒီလို မှတ်သားသိနိုင်ခြင်းက မိမိ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုမို သိနိုင်ခြင်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလေးထား ဂရုစိုက်နိုင်ခြင်းလည်း ဖြစ်မယ်။
4. အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်း (သို့) ခြေလက်ဆွဲဆန့်ခြင်းတို့ကို လုပ်ပါ။ ရာသီလာရင် ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ရှားမှုကို ပို လုပ်သင့်တယ်လို့ ကျမထင်မိတယ်။ ကျမ အအတွေ့အကြုံအရဆိုရင် ဗိုက်နာလာတိုင်း ယောဂ လုပ်လိုက်ရင် တော်တော် သက်သာတာမျိုး ဖြစ်တယ်။ ယောဂ မလုပ်ချင်သူအတွက်က လမ်းလျှောက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်သင့်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ရှားမှုက အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတွေထက် ထိရောက်မှု ရှိတယ်လို့လည်း တွေ့ရှိချက်တွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ရွေးချယ် လုပ်ပေးဖို့ အားပေးချင်ပါတယ်။
5. ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြစ်စေတဲ့ အဝတ်အစား၊အတွင်းခံကို ဝတ်ပါ။
ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် ရာသီလာတဲ့ ချိန်မှာ ကပ်ခွာ သေချာ အသုံးပြုတတ်ဖို့ ဘယ်သူမှ မသင်ကြားပေးခဲ့ဘူး။ အဲ့လို ဆိုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အမှားမှား အယွင်းယွင်းနဲ့ အသုံးပြုရင် နေရထိုင်ရခက်ခဲ့ရတဲ့ အကြိမ်တွေ မနည်းဘူး။ ကပ်ခွာ သုံးရင် အတွင်းခံကိုလည်း ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးနဲ့ လေဝင်လေထွက် အဆင်ပြေမဲ့ အပြင်ဝတ် အဝတ်အစားကို ရွေးချယ်ဝတ်တာ ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ နောက်ပိုင်းကျမှ သိခဲ့ရတယ်။ ရာသီလာတဲ့ချိန်မှာ ကျမတို့ တော်တော်များများဟာ စိတ် အတက်အကျ လွယ်တဲ့ အခြေအနေတခု မှာ အလိုလို ရောက်နေတတ်ကြတဲ့ အပြင် ဒီလို စိတ်သက်တောင့် သက်သာ မရှိတဲ့ အဝတ်အစားတွေက ပိုပြီး စိတ်အနှောက်အယှက် ပေးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်အတွင်းမှာပဲ နေနေ၊ အိမ်ပြင် ထွက်ရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိမိအတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လွှတ်လပ်စေမဲ့ အတွင်းခံနဲ့ အပြင် ဝတ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
6. တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှုကို အလေးပေးပြီး ပုံမှန် လုပ်ပါ။
ကျမတို့ကို ငယ်ငယ်တုန်းက ရာသီသွေးက ညစ်ပတ်တဲ့ အရာလို့ သင်ခဲ့ပေးတော့ ရာသီလာတဲ့ ၃ရက်ကနေ ၅ ရက်ထိက အိမ်သာထဲကို ဆပ်ပြာယူယူသွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပိပိကို မွှေးအောင် ဆပ်ပြာနဲ့ ဆေးရမယ်လို့ ထင်လို့။ဒီထက် ပိုဆိုးတာက ကျမ ကြီးပြင်းလာတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ယုံကြည်မှုကြောင့် ရာသီလာပြီး သုံးရက်မပြည့်ရင် ရေမချိုးရဘူးဆိုတဲ့ အလေ့အကျင့်ရှိတော့ တကိုယ်ရေး သန့်ရှင်းရေးကို မလုပ်ခဲ့ရဘူး။ နားလည်အောင် ရှင်းပြမဲ့သူလည်း မရှိခဲ့ဘူး။ အမှန်တော့ ပိပိကို မကြာခဏ ရေနဲ့ ဆေးကြောပေးရင် လုံလောက်ပါပြီး။ ပုံမှန်ရေချိုးနေကျ အချိန်မှာ ရေချိုးပါ။ မိမိခန္ဓာကိုယ�